Cabdi Bashiir Indhobuur - Wikipedia
Cabdi Bashiir Indhobuur
Cabdi Indhobuur waxa uu ka mid ahaa abwaanadii fara-ku-tiriska ahaa ee loogu jeclaa fanka Soomaaliya. Wuxuuna ku dhashay degmada Gaalkacyo ee gobolka Mudug, Soomaaliya. 1963dii ayuu wuxuu ku biiray ciidaanka booliiska, 1972dii ayuu u soo wareegay Magaalo-madaxda Muqdisho isagoo ka howlgalay Dekadda, kadibna ku soo wareegay kooxda Heegan.
1 Heesihii iyo Riwayaduhuu curiye
2 Geeridii Cabdi Bashiir
Abdi bashiir waxuu ku soo barbaray magaalada Gaalkacyo,waxuuna bartay Quraanka iyo shareecada Islaamka oo uu meel sare ka gaaray oo culumada ay ka mid ahaayeen Macallim Mohamed iyo Macallim Daahir allaha u naxariistee uu ka aflaxay ka dibna dadka reer Gaalkacyood ka ah ku qiimayn jireen aqoontaas alle siiyey.
Abdi waxuu ciidanka ploiceka ka galay magaalada Mgadishu,intii aan loo bedelin Hargeysa 1965,Indhabuur waxuu galay schoolo kala ah Carabi iyo Talyaani oo meel fiican ka gaaray.Waxuu joogay hargeysa 1965-1967 oo uu ka galay school English ah,marka Cabdi waxuu ku hadli jirey sedex luuqadood(Tri-lingual).Ka dib waxaa loo soo bedelay Gaalkacyo oo ay codsatay hooyadayo oo aad u jeclayd Indhabuur si uu ula noolaado,caruurta aan ka mid ahaana oo ula koriyo. Waxuu Cabdi ku sugnaa Gaalkacyo 1968-1972 ka dibna waxaa loo bedelay Mogaishu oo madax ka noqday Kooxdii heegan(1972-1991)ilaa gacan ka xaqdaran ay dishay. Cabdi waxuu ahaa Abwaan,aftahan,aqoonyahan,doodaa aan laga daba hadlin. Waxaan Indhabuur la noolaa(1972-1974)oo aan dhiganayey dugsigii dhexe ka dib aan ka aaday dugsi sare oo boarding ahaa. Waxaan Cabdi ahayn walaalo iyo saaxiib dhaw oo aad isku qadariya. Waxaan Cabdi ku qiimayn jiray sida uu hooyadayo u jeclaa oo u xanaanayn jiray haday noqon lahayd baarinimo,naxariis iyo u jajabnaan,waxaana taas daliil u ah inta hees uu hooyo u tiriyey,tiro afar aan ka xasuusto. Taariikhda bashiir indhabuur halkan kuma soo koobi karo insha-allah waxaan ka qori doo buug,laakin bal hada aan halkan ku joojiyo.
Heesihii iyo Riwayaduhuu curiye[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Riwaayadihii uu sameeye waxaa ka mid ahaa: 'Guur qayaano' iyo 'Gantaalo jaceyl' oo la soo bandhigay 1978dii. Hasayeeshee waxaa Cabdi Bashiir Indhobuur lagu xasuustaa heeso farabadan oo ilaa maante caan ah.
Heesahaasi oo iskugujira kuwo Wadani ah iyo kuwo Jacaylba leh, waxaa ka mid ah: 'Boolisku waa', 'Arligaygoow, 'Heybad waxaad ku leedahay', Maskax gaabnidaa, Isku duubni, Dhabta miyaan ku saaraa, 'Hallow', 'Qaranimo', 'Dal barwaaqo & dadka baahan', 'Adinkiyo awoodayadaay', 'Abaal hooyo', 'Hooyooy wax lagu dhigaa la waayey', 'Midnimo u adeeg', 'Dumarow ha suuroon', 'Subxaan Yaa Qafaar' iyo kuwa kale oo fara badan.
Geeridii Cabdi Bashiir[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Allahaa u naxariistee Abwaan Cabdi Bashiir Indhobuur waxaa lagu diley xaafada Afisyooni ee degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho 1990kii.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Cabdi_Bashiir_Indhobuur&oldid=204302"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 28 Luuliyo 2020, marka ee eheed 06:47.